Du'aa ka'uu Yesuutti kan amannuuf maaliif?
Yesus Kristoos Yihudoota biratti jaarraa jalqabaatti fannoo Paantihoos Pilaatos irratti gaaffii fannoo Yihudiitti Saaduqootni gaaffataniin akka fannifame kun dhugaa ifatti beekamaa dha. Kristaana warri hin taane beektootni seenaa odeefannoo Filasviyes Josfes Korelinis Taktiyes Lusiyaasn Samositaa Ma'imondis Yihidoota Saaduqootaa bara jalqabaatti kristaanoonni turan dhuga baatoota ijaa dabalatee kanaaf seenaa keessatti isa guddaa waan ta'eef waa'ee du'a Yesus Kristoos gabaaseera.
Du'aa ka'uu ilaalchisee kallattii karaa baay'eedhaan waan hin godhamne kan raawwatan odeefannoon baay'een jiru. Beektoota seeraa ajaa'ibsiisoo duraanii fi bakka buutotaa sabaa biyyoolessaa Layoon Kukoo (Kitaaboota ajaa'ibsiisaa addunyaa irraa adda kan ta'e qormaata ittisaa 245 kan ittiin gadi dhiisise) fedha kristaanaa fi amantii wajjin wal fakkeesee du'aa ka'uu irratti amantii qabu fi jabbina yeroo barreessuu "Abukatummaan addunyaa irratti iddoo adda addaa dhaabbadheera waggaa 42 ol ta'eera, ammas ariitaadhaan shaakalaan jira. Kanaan fiixaan ba'umsa heedduu qormaataa fuulduraa baay'ee keessatti argadheera fi dorgomuu bifa hin dandeenyeen du'aa ka'uu Yesus Kristoos baay'ee ajaa'ibsiisaa dha amanuudhaaf kan dirqisiisuu fi amanuudhaan shakkii homaa illee banaa kan hin uumnee dha."
Hawaasni addunyaa irra jiru deebiin odeefannoo wal fakaataa tilmaamuu kan danda'u kennamuu isaanii addaa cimaa wajjin dhaga'uudhaan karaa isaanii galagaltoo uumamaati. Ibsichaa wajjin kan walii hin galle uumamaa alaatti karaa ta'een ibsuuf dadhabuun karaan namaa kan uumamaa fi sababa uumamaa qofaa dha. Ifaa kan ta'an ta'iiwwan seenaa ibsa uumamaa mormuuf (Fakkeenya du'aa ka'uu ajaa'ibsiisaa) odeefannoo ilaalatee ammam illee fudhatama qabaachuu yoo danda'e na dhaga'u danda'aa osoo ta'ee beektoota addunyaa shakkii cimaadhaan isa ilaalu.
Ilaalcha keenyaan kan akkanaa uumamni sababa amansiisaa odeefannoo amansiisaa faallaa isaa ilaalchisee odeefannoo qorachuuf walakkaatti amanuuf kan gargaaru miti (keessaa iyyuu kan ga'uu dha). Nuyi D/r Woriner Voone Birawuuni fi kan biroon baay'een ammas qabatamaatti dhugaa qabatamaa irratti gufuu kan uuman falasamtootni beekamoon dursa tilmaamaa dhiibbaa uumuu ti warra amanan wajjin walii gala. Yookaan jecha Dr Voon Birawuun "amanuuf dhiibbuun guduunfaa isaa kamii dha….kan saayinsii qabatama isaa cabsuu danda'a.
Akkas yoo jennu amma du'aa ka'uu kan fudhatan sarara odeefannoo isaanii haa qorannu.
Kan jalqabaa sarara odeefannoo du'aa ka'uu Yesus
Jalqabuuf dhuga baatoota ijaa karaa ifa ta'een ni barbaanna. Kristaanoota duraanii irratti kan amataman dhibbaan kan lakkaa'aaman dhuga baatoota ijaa eeru, warri tokko tokkoo shaakala amansiisaa ofii isaanii barreessanii kan kaa'aa nii dha. Baay'een isaanii isaan dhuga baatoonni ijaa kun osoo hin ganiin fedhii isaaniiti fi kutatummaadhaan hidhaa dheeraa fi du'aan itti jabaateera. Dhugaan isaa amanamoo ta'uu isaanii mirkaneessa, qooda isaan bitta itti galuu ari'uu isaanii odeefannoo seenaatiin (HoE. 4:1-17, Piinii Letarjaan Aksii 96 xalayaa inni barreesse) kristaanoonni baay'een amantii isaanii ganuu qofaan rakkina isaanii dhabamsiisuu danda'u turan. Qooda kanaa baay'een isaanii rakkina keessatti jabbaachuun du'aa ka'uu Kristoos amma xumuraatti labsuun kan filatan fakkaata.
Heyyameera, aarsaan barbaachiisaa yeroo ta'u dirqamatti mormuun barbaachiisuu dhiisuu danda'a. Akka amanichaatti amantiin isaa kan dhugaa ta'uu isaa mirkaneessuun hin barbaachiisu, (kan isaa yookaan kan ishee dhugummaa haala qabatamaan mirkaneessuun). Kristaanoota duraanii kitilamtooota kan addaa kan isaan taasisu kan mirkaneessan dhugaa yookaan soba beeku turan. Yesus akkas ta'e yoo arganiis du'a boodee yoo arganis yoo hin argines. Kun raawwatee kan adda ta'ee dha. Hunduu soba utuu ta'ee maaliif baay'een isaanii dhiisuun akka itti fufu godhan? Maaliif hundumaa osoo beekanii soba faayiidaa hin qabneen ari'atamuun hidhaan tumuu fi du'aatti maxanan?
Fulbaana 11 bara 2011 badanii kan balleessan butootni shakkii malee kan dhugaa ba'aaniif shakkii malee itti amanuu (dhugaa ba'uuf fedhii isaaniin du'uu barbaaduu argisiisa) dhugaa ta'uu danda'uu isaa hin beekaan beekuu hin danda'an. Amantii isaanii dhalaootaan aadaan dabarsanii kan isaaniif dhufeef kennan. Madaalaawwan kan dursan kristaanootni kitimamtootni dhaloota jalqabaa turan. Akka arganiif kan dubbataniif arganis arguu baatanis.
Eeramu kan danda'an waan argan kan dhugaa ba'an ergamoota dha. Isaan bakka tokkootti jijjirama hin dagatamne du'aa ka'uu ifa ta'een du'aa booda Yesus yeroo mul'atu isaan irratti godhameera. Akkuma sanaan fannicha gubanii sodaadhaan dhokatan. Du'aa ka'uutti aansee karaa irratti qabee ija jabummaan ari'atamni yoo itti dabalamees du'aa ka'uu lallaban. Isaaniif jijjirama akka tasaa fi ajaa'ibsiisaa sababni isaa maalii? Sirritti horii waan argataniif miti. Ergamichi du'aa ka'uu isaa lallabuuf waan qaban hundumaa dhaban, jireenya isaanii dabalatee.
Lammaffaan sarara odeefannoo du'aa ka'uu Kristoos
Sararrii odeefannoo lammaffaan kan inni ilaalatu baay'ee kan beektan furtuu ta'ee warri shakkan Phaawulosii fi Yaaqoob. Phaawuloos fedha mataa isaan fincilaan waldaa kristaanaa ishee jalqabaa ari'aataa ture. Kristoos isa du'aa ka'ee wajjin erga wal argee boodee Phaawulos akkuma sanaan jijjirama ajaa'ibsiisaa keessa seene gara jabinaan waldaa kristaanaa ari'achuu irraa gara waldaa kristaanaa bu'aa qabeessaa fi of jaallatuu hin taane falmaa. Akka warra duraan turani kiristaanootaa Phaawuloos du'aa ka'uu Kristoosiif of kennuu inni qabu jabinaan raawwachuuf mana hidhaatti dhiphateera ari'atameera reebameeran mana hidhaattis gatameera.
Yaaqoob shakkaa ture akka Phaawulos garuu dinuummaadhaan miti. Du'aa ka'uu booda Kristoos wajjin fakkeesuudhaan gara shaakala dhi'oo amanaatti jijjiree geggeessaa waldaa kristaanaa Yerusaaleem godhe. Waldaa ishee duraanii xalayaa tokkoo ta'uu kan danda'u ammas geggeesitootni waluma galatti kan isaan fudhatan jira. Akka Phaawulos Yaaqoob fedha isaan dhugaa ba'uudhaan du'eera dhugaaf jedhee waa'ee dhugichaaf dhugaa ba'aa. (Hojii Ergamootaa fi Josfasii Antikoyitis kan Yihuudii xx 1).
Sarara odeefannoo sadaffaa fi afuraffaa du'aa Kristoos
Sararri odeefannoo sadaffaa fi afraffaan kan inni argisiisuu waa'ee hawwaala duwwaa fi waa'ee du'aa ka'uu Yerusaleem hundee kan gadi fageeffate amantii turee fi dinootaaf dhuga baatii dha. Yesus saba duratti Yerusaalemitti ajjeefame akka awwaalamu godhameera. Bu'uura du'aa ka'uun qabatee amanuun Yerusaaleemitti kan hin danda'amne ture hanga ammatti qaamni isaa awwaala keessa yoo ta'e warri Saduqootaa qotanii kan baasan bakkeetti baasanii akka mul'atu kan ka'aaniif sababa kanaaf oduu uumame godhu turan. Kana irra warri Saduqootaa Ergamoonni qaama isaa fudhatraniiru jedhanii komatan ifatti baduu isaa ifaa gochuuf qabatamaatti dubbatan (kanaaf awaalichi duwwaa dha). Akkamitti awaalcha duwwaa dhugaa isaa kan ibsinuuf. Kan barataman ibsawwan sadii kan itti aananii jiranii dha:
Tokkoffaa, ergamoonni qaama isaa hatan. Inni ajjessee kana utuu ta'ee du'aa ka'uun himtee afaanii akka ta'ee amanu turan. Rakkina fudhachuun isaaf du'uuf heyyamamoo hin ta'aan turan (waa'ee warra amananii dhuga-baatoonni ifatti kan dubbatuu odeefannoo saraara jalqabaa ilaali.) Hundumaa gowoomsuuf dhuga-baatoonni Yesus Kristoosiin akka hin agareetti sirritti beekuu danda'u akkasumas eessatti akka soban. Mormitoota kana hundumaa birratti dhugaatti inni tokko dubbataa ture osoo hin taanee garuu dhiphina isaa dhaabuuf achi irraas yoo xiqaatee kan hiriyoota isaa fi dhiphina maatii isaa dhaabu. Dhaloonni jalqabaa kristaanoonni raawwatanii dhiphataniiru keessaa iyyuu gubannaa abiddaa itti fufee Dhaloota Kristoos booda 64 (Neeroon bakka isaa bal'ifachuuf akka gubuu abiddi inni ajaje garuu immoo Room kan jiran Kristaanoota ofii isaa bilisa of-gochuuf kan yaade) seenaa Roomaa beektichi Qorneliyoos Taktees seenaa bittaa Roomaa akka jedheetti (abiddaan erga gubamee booda dhaloota dhufe booda maxanfame):
"Neeroon badii isaa jabinaan itti fufee dirqamsiisee hidhaa cimaa baay'ee kan jibu saba kristaana jedhamanii warra waamaman kutaawwan godhe. Kristuus hiika maqaa isaa bakka dhufee irraa kan argate Pantoos Pilaatoos irraa haala olaanaan yeroo Tiberiyes mo'eetti adabni guddaan harka mindeefamaa tokkootti kan dhiphate, Paantoos Pilaatoosi fi baay'ee gowoomsaa waaqefannaa bu'a maleessa kan akka kanaa yeroo sanatti mirkaneessee irra deebiin Yihudaadhaan cabsanii dhufan, kan jalqabaa ka'umsi hameenyaa garuu Roomittis yoo ta'e waan hundumaa hamaa fi sodaachiisaa ture naannoo addunyaa hundumaa irraa giddu galeesummaa isaanii argatanii beekamtoota ta'an. Haala kanaan warri hisiisan turan jalqabatti badi kan godhan ta'anii kan argaman itti fufee odeefannoo isaanii irratti baay'ee saba baay'eetu itti amane, baay'ee kan hin taanee badii gootota magaalichaa sanyii namaa irratti jibba qabu. Du'a isaanitti tokkoon tokkoon isaa irratti qoosaan itti dabalama ture. Gogaa dubbartootaan fuula isaanii uwisanii sarootaan baqafamanii badu yookaan fannoo irratti fannifamu yookaan ifni guyyaa yeroo badu ifa galgalaa ta'uu gubaa abiddaatiin gubatu." Dhaaba bakka bashanana isaa kristaanoonni lubbuun utuu jiranii gubuun bareeche. Dhugaatti namni tokko dhugaa isaa dubbachaa ture dhukkubbii cimaa akka kanaa dhiphina guute keessatti. Dhugaan isaa kana haa ta'u malee kristaanoota duran turan dhiphinicha hambisuuf jedhee amantii isaa kan gane hin jiru. Qooda kanaa odeefannoon baay'een du'aa ka'uu booda kan argamanii fi dhibbaan kan lakka'aaman dhuga-baatoonni ijaa kanaaf rakkina fudhachuu fi du'uuf heyyamamoo turan.
Duuka bootonni qaama isaa osoo hatuu baataanii hawaala duwwan akkamitti ibsina? Warri tokko tokkoo Kristoos du'a isaa fakkeesseera achii hawaalcha keessa miliqeera jedhu. Arabsoo ifaa dha. Akka dhuga baatoota ijaatti Yesus reebbameera dhiphateera mumuramee madaa'eera fi waraanameera. Miidhaa keessaatiin dhiphateera dhiigni baay'een dhangala'eera ukkamfameera laphee isaa jala waraanameera. Sababni kam iyyuu hin jiru akkasitti amanuun Yesusin (yookaan nama kan biraa kam iyyuu) dhiphina kana keessatti sodaachisuu kan danda'u, du'a isaa fakkeessuun hawaalcha keessa guyyaa sadii fi halkan sadii taa'uun hordoffii yaalaa kam iyyuu malee nyaataa fi bishaan malee hawaalcha isa guddaa dhagaa irra ka'aamee irra galagaluun mallattoo kam iyyuu malee muliquun (mallattoon dhiigaa kam iyyuu osoo hin jiaraatin), dhuga baatoota dhibbaan lakkaa'aman fayyaa guutuudhaan du'aa akka ka'e amansiisuu fi mallattoo kam iyyuu malee in bade jechuun, qoosaa hin fakkaanee dha.
Inni shanaffaan sarara odeefannoo du'aa ka'uu Yesus Kristoos
Inni xumuraa sararri odeefannoo kan inni argisiisu dhuga baatoota ijaa shaakala hin baratamne. Gurguddoo kan ta'an hundumaa seenesa du'aa ka'uu dubbartootni dhuga batoota warra jalqabaati. Yihudoota duris ta'e aadaa warra Girikiitti tilmaamni gad aanaan kan kennamuuf hanga ta'eetti kun tarii waan keessummaa ta'uu danda'a. Dhuga baatiin isaanii kan tuffatamee fi gati maleessa ta'eeti kan inni lakkaa'amu. Dhugaa kana qabannee haala guddaadhaan dogogora kam iyyuu yoo ta'e oduu kalaqaa jaarraa jalqabaatti dubbartoota Yihudoota dhuga baatoota jalqabaa ta'ani akka dhufan hin barbaadu. Yesus ka'eera jedhanii dhugaa kan ba'an duuka buutuun dhiiraa kam iyyuu hunduu yoo sobanii fi du'aa ka'uu isaa waliin dha'uuf maaliif tilmaama gowwaa xumuraa fudhatu maaliif ragaa hin amanamne barbaadu?
D/r Wiliyaam Laan Kiraag yeroo ibsu "Jaarraa jalqabaatti dubbartootni hawaasa Yihudootaa keessa qoodni isaan qaban yeroo hubannuu waan addaa kan inni ta'uf kun hawaalcha duwwaa dubartootni kana argachuuf kan jalqabaa isaan godha. Dubbartooni Paleestiyaniin kan turan geggeesitoota hawaasaa birratti tilmaama gadi aanaa qabu turan. Kan turee jechamni barsiisootaa ture 'jechi seerrichaa mucaa dubaraaf kan dhi'aatu caalaa gubatee fi mucaan dhiiraa kan inni qabu inni kan eebbifamee dha ijoolleen dubartii yoo ta'aan isaaniis ayoo' dhuga baatiin dubbartootaa homaa gatii kan hin qabne godhame fudhatama ture mana murtii Yihudootaa duratti dhi'aate ragaa seerra qabeessa kennuun in hiyyamamuuf. Bu'uurri yeroo bu'uurefamu kan ta'u qabu dhuga baatoonni hawaalcha duwwaa dubbartoota dha. Gabasttooni duraanii kam iyyuu hawaala duwwaa kan argan dhiira akka ta'an yoo ka'aanis fakkeenyaaf Pheexiroos, Yohaannis. Ragoonni dhugaan jalqabaa hawaalli duwwaa ta'uu isaa kan argan dubbartoota jedhe haala nama hin amansiifneen akka ibsame dhugaatti yoo barbaadanis barbaaduu baatanis isaan hawaala duwwaa kan arganii dha! Kun kan inni argisiisu barresitoota Wangeelaa amanamummaadhaan akka barreesnii dha, homaa kan nama hin qaanessu yoo ta'es. Kun kan inni argisiisu sadarkaa olaanaa kan buufate caalaa seenaa aadichaa ti." (Dr. William Lane Craig, quoted by Lee Strobel, The Case For Christ, Grand Rapids: Zondervan, 1998, p. 293)
Sararoonni kun ragaa kan ibsan kan amaname kan ta'an dhuga-baatoota ijaa (Dhimmi Ergamootaa, dirqisiisuu, jijjirama mul'achuu hin dandeenye) jijjiramuu isaanii fi dhugaa ifaa kan faalleessu dha fi shakkisiisaa gara samiiti dhugaa hawaalcha duwwaa ragaa diinaa hawaalcha duwwaadhaaf dhugaan isaa kana hundaa kan ta'e Yerusaalemiti Du'aa ka'uun ragaa malee kan jalqabamee fi kan jabaate, dhuga baatiin dubartootaa dhuga baatiiwwan kana ragaawwan isaan kanaa barbaachisummaa isaa seena akka yaadichaatti kennaaf isaan kun hunduu mirkaneessummaa seenaa du'aa ka'uu argisiisaniiru dhugaas ba'aniiru. Fi dubiftootni kenyaas isaan dhuga baatiiwwan kana sirritti akka itti yaadan ni jajjabeesina. Siif maalii dha kan sitti himan? Ofi keenyaa akka itti yaadnu ol kaafne akka gadi buufnu godheera, ejjennoodhaan nuyi kan abbaa Liyonelin labsii mirkaneesina:
"Ragaa du'aa ka'uu Yesus Kristoos irra darbee kan ba'u dhugummatti fudhachuun kan dirqamsiisu shakkiidhaan raawwatee bakka kam iyyuu kan hin dhiifnee dha.